Iidola ezingama-300 ze-IKEA zokuNgcwaba - I-Millennial Pink IKEA Couch - Iiprojekthi Ze-Diy
Ukupheka + Iincwadi Zokupheka
Iidola ezingama-300 ze-IKEA zokuNgcwaba - I-Millennial Pink IKEA Couch
Ukuthengela isofa esitsha kungacaphukisa. Nje ukuba ufumane ubume obufanelekileyo, umbala kunye nokuqina, uya kufumanisa ukuba ngamakhulu aliqela- okanye amawaka-eedola kuhlahlo-lwabiwo mali. Kodwa xa uKrys evela kwibhlog IMelodrama waqala ukukhangela isiqwenga esitsha, wayemjongile Isingqengqelo sama- $ 250 eKarlstad Ufumene kwicandelo lokususa i-IKEA. Emva koko wathatha laa khewu imhlophe wayiguqula yaba sisofa epinki yeminyaka yamaphupha akhe ngeedola ezingama-50 ngaphezulu.
Kuba iKarlstad iza nesiliphu esisuswayo kwaye yayingelo mali inkulu, wayesazi ukuba ngumgqatswa ofanelekileyo kwi-IKEA hack. Ukuba awunakufumana i-Karlstad kwicandelo lokususa, uya konwaba ukuva ukuba ngexabiso elipheleleyo, isephantsi kwe- $ 500 kwi- $ 399.
ngaphambili ifenitshala imibono yefenitshala
Le ndiyithengileyo yayinesigqubuthelo esingwevu kwaye i-IKEA yam yayithengisiwe ngaphandle kwesembozo esimhlophe, utshilo uKrys kwiHouseBeautiful.com. 'Ngethamsanqa umhlobo wam osenyongweni eFlorida wayifumana kwivenkile yakhe kwaye wakwazi ukuyithumela kum.'
Nantsi indlela ebibonakala ngayo ngaphambili:
THENGA NGOKU: $ 399, iKarlstad Sofa, ikea.com
Njengoninzi lweeprojekthi ze-DIY, okokuqala ukuzama kukaKrys ukuyidaya nge-mileniki epinki kunye neRit Dye kwi-'petal pink 'kugqibe ngepinki eshushu kakhulu.usebenzise isikhuphi sombala ukubuyisela isiciko sesiliphu kumhlophe kwaye siqale ngaphezulu.
Ngeli xesha wadibanisa kunye nemibala eyahlukeneyo yeRit Dye kwi ' Ipinki ebomvu , '' ilamuni etyheli kunye ' ke . '
THENGA NGOKU: Ukusuka kwi- $ 2.98, kwiRit Dye, amazon.com
Indlu yeenyawo ezingama-600
Andikwazi ukukuxelela ngqo le mibala bendiyisebenzisa emthunzini wam kuba bendihlala ndilungisa kwaye ndivavanya umbala, utshilo uKrys. Ndifuna ukuthi yayiyinto efana nezahlulo ezi-4 ezipinki, i-1/2 yenxalenye etyheli, i-1/8 yenxalenye ye-tan, kodwa andiqinisekanga nge-100% ukuze ungabuyi undingxolise ukuba eyakho iphelele. Ndiphinde ndayixuba kakhulu kunakuqala ukuze umbala ubengaphezulu. '
Ngelixa unganakho ukuyifumana kwivenkile yakho yendawo, iAmazon iyathengisa Idayi yeRit 'yema rose.' ejongeka ngathi ikhanya ngokukhanyayo kune-'petal pink 'Krys eyayisetyenziswa kwasekuqaleni kwaye inokwenza iqhinga ngaphandle kokuxuba umbala wesiko.
THENGA NGOKU: $ 7.11, Idayi yeRit kwi 'Rose Quartz,' amazon.com
Emva kokufumana umbala ngokuchanekileyo, i-Krys yokupeyinta yapeyinta i-2 yeedola zesitayile semilenze kwisitayile seLowe ngegolide nomhlophe kwaye wayincamathisela kwisiseko sebhedi ukuze ufumane iinkcukacha ezongezelelekileyo. Sifumene ezifanayo kwi IAmazon nge- $ 2.48 nje nganye ngokuthumela simahla.
THENGA NGOKU: $ 2.48, Umlenze ojikeleze ii-intshi ezingama-6, amazon.com
Ngokuchukumisa okokugqibela, wongeze amaqhosha afakwe ngasemva esofeni ngokusebenzisa i 7/8 'ikhava yokufaka kunye nentambo kunye nezongezo ezongezelelekileyo zelaphu azifumene kwibhini yokucacisa ye-IKEA.
Lilonke, iprojekthi iyonke ixabise ngaphantsi kweedola ezingama-300 kwisingqengqelo esijongeka ngokupheleleyo. Bona ezinye iinkcukacha ze-DIY ngaphezulu IMelodrama .
amakhadi eentsuku ezimnandi zevalentines
ipeyinti yeoyile yeendonga
izibane ezixhonyiweyo phezu kwetafile yokutya
Ngaba smith indlu imifanekiso